सरकार किन कानमा ते’ल हालेर बसेको हो ? काम गर्न सकिँदैन भने कु’र्सी छोड! – बाबुराम भट्टराई – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
सरकार किन कानमा ते’ल हालेर बसेको हो ? काम गर्न सकिँदैन भने कु’र्सी छोड! – बाबुराम भट्टराई
काठमाडाैं, ६ असाेज । जनता समा,जवादी पा,र्टी, नेपालका व,रिष्ठ नेता तथा पूर्व प्र,धानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले चीनबाट आ,यात गर्न लागिएका सा,मान लामो समयदेखि सीमामै रोकिँदा पनि भित्राउन प,हल नगरेको भन्दै सरकारप्रति क,टाक्ष गर्नुभएको छ ।
उहाँले मंगलबार समाजिक स,ञ्जाल ट्वीटर मार्फत चीनबाट आ,यात हुन लागेका बीस अर्ब बढी मू,ल्यका सा,मान सहितका कन्टेनर ६ महिना बढी समयदेखि सी,मानामा अल,पत्र परेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले लेख्नुभएकाे छ- ‘छिमेकी चीनबाट आ,यात हुन लागेका बीस अ,र्ब बढी मूल्यका सामान सहितका क,न्टेनर ६ महिना बढी समयदेखि सी,मानामा अल,पत्र भएर बसेकाले नेपाली व्यव,सायीहरूलाई आ,सन्न चाड,बाडको मु,खमा ठूलो असु,विधा र नो,क्सान भैरहेको छ ।
व्यवसायीहरू हा,रगु,हार गर्दै य,त्रतत्र कुदि,रहेछन् । सरकार किन कानमा तेल हा,लेर बसेको हो ?’ news24 बाट
Previous राप्रपाकाे चु`नावचिन्ह ‘हलाे’ राख्ने सह`मति, ‘गाई’ छाड्नुपर्दा कमल थापाको पी`डा यसरी पाेखियाे!
Next डाक्टर के’सिका मा,ग पुरा गर,सौतेनी व्य,वहार नगर सरकार,नत्र जनताले छाड्दैनन् -रमा वलि